Maitiro ekugadzirisa ako aunovimba Apple zvishandiso | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa ako akavimbika Apple zvishandiso
Kuongorora kweApple-nhanho inzira yekuchengetedza iyo vese vashandisi vaifanira kuve vakagonesa. Kuburikidza nemaitiro aya unoona kuti chete michina mitsva inogona kuwedzerwa kuaccount yako, kana kuwana uye kugadzirisa data kubva mairi nekubvumidza iko kuwana kubva kune chimwe chishandiso chatakasarudza se "Anovimbwa nemidziyo". Asi zvishandiso zvedu zvinoshanduka, tinotenga zvitsva, tinotengesa zvekare… uye izvi zvinoreva kuti chimbo chaivimbwa chingasave zvakadaro. Isu tinotsanangura pazasi maitiro atinogona kushandura iyi runyorwa rwezvigadzirwa kuti tigare tichiita kuti ive nekuvandudzwa.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuwana yedu Apple account, nekuti izvi tinoenda kune iyo peji https://appleid.apple.com uye tinya pa "Manage yako Apple ID". Isu tinopinda yedu yekuwana data uye sezvo isu tine maviri-nhanho ongororo yakaitwa, isu tinofanirwa kuisa iyo kodhi inotumirwa kwatiri kune chimwe chezvinhu zvedu zvakavimbika.
Pane imwe nguva mukati medu account, isu tinofanirwa Sarudza mumenyu kuruboshwe sarudzo «Password uye chengetedzo» uye ipapo sarudza sarudzo «Wedzera kana kubvisa zvishandiso zvakavimbika».
Iyi menyu ndipo panozoonekwa zvese izvo zvishandiso zvine chekuita neyako iCloud account. Unogona kuona chishandiso chisisiri chako uye nekudaro hachifanirwe kunge chiri pachinyorwa. Nekudzvanya pa «Delete» zvinobva zvango nyangarika uye haichazove chishandiso chinogona kupa chero shanduko kuaccount yako. Unogona kuwana zvishandiso izvo zvakamirira kuti zvionekwe kuva chikamu chako akavimbika namano. Nekudzvanya pa "Verify" kodhi inotumirwa kuchinhu icho kana ukachiisa, inenge yatove kuiswa mune yako runyorwa
Izvo zvakakosha kuti uve neimwe (kana yakawanda) nhamba yefoni seyakavimbika mudziyo. Ndiyo chete nzira yaunogara uchivimbisa nzira yekuwana account yako mune iri kure kesi iwe yaunorasikirwa zvese zvishandiso zvaunazvo. Iwe unogona kugara uchikumbira kuteedzerwa kweSIM yako uye kugamuchira iwo meseji ipapo kuti uwane account yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » ICloud » Maitiro ekugadzirisa ako akavimbika Apple zvishandiso
Tevedza mwaka mutsva weNBA neiyo yepamutemo app
Dhawunirodha iwo mapikicha ezviziviso zvitsva zveApple Watch